I-AR.js izisa inyani eqinisekisiweyo kwiwebhu simahla | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | Bugcisa, Ezahlukeneyo
Sele siyazi ukuba njengeetekhnoloji esizibonayo kwiinkqubo ezahlukeneyo okanye kwimidlalo yevidiyo iqhubela phambili, ezi emva koko uye kwiwebhu ukubonelela ngamanye amava Umsebenzisi owahlukileyo. Le yimeko yeAr.js eza kuzisa ubunyani obungathandabuzekiyo kwiwebhu.
I-AR.js yenziwe nguJerome Etienne nge Injongo yokwenza ukuba kufumaneke kubo bonkekwinyani eyongeziweyo. Elinye lamandla alo kukuba ukusebenza kuphuculwe kwaye inyani eyongeziweyo isebenza ngcono kakhulu kwiselfowuni, ke ngoku inokubonwa kwizakhelo ezingama-60 ngomzuzwana kwiifowuni ezisuka kwiminyaka emithathu edlulileyo.
Ukuphuculwa kokukwazi ukumilisela ithala leencwadi kwiiprojekthi ezintsha ezithatha ithuba lokulunga kunye nezibonelelo zenyani eqinisekisiweyo. Sijongene ne Isisombululo esicocekileyo sewebhu ngeAR.js, ke isebenza kuyo nayiphi na ifowuni ngeWebGL kunye neWebRTC.
Olunye uphawu olukhulu lweAR.js kukuba kunjalo Umthombo ovulekileyo kwaye simahla, ke iyafumaneka kuye nawuphi na umphuhlisi ukuba athathe ithuba kwangoko. Eyona nto ibaluleke kakhulu, iAR.js ivumela ukufikelela kwi-AR ngaphandle kwesidingo sokufaka naziphi na izicelo ezongezelelweyo kwaye ngaphandle kwesibophelelo sokuthenga isixhobo.
Nabani na onesixhobo esivunyelwe i-AR onokonwabela amava e-AR. AR.js, ikakhulu, ixhomekeke ekusebenzeni nasekulula. Kwaye sithetha ngento yokuba ukunganyanzelekanga okwenyani kunokucwangciswa ngemigca eli-10 kuphela ye-HTML.
Kungenxa yesi sizathu sokuba ngakumbi nangakumbi abaphuhlisi eziya zisondela kwiAR.js, ke kungekudala siza kubona amava okwenyani angakumbi nangakumbi kwiwebhu kunye neli thala leencwadi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » AR.js ukuzisa ubunyani obungathandabuzekiyo kwiwebhu